Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း)
Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Colchicine အား ဂေါက်ရောဂါဖောက်ခြင်း (Flares) အား ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ကုသရန် အသုံးပြုပါသည်။ များသောအားဖြင့် ဂေါက်လက္ခဏာများသည် ရုတ်တရတ်ထပေါ်လာတတ်ပြီး အဆစ်တစ်ခု သို့ အဆစ်အနည်းမှာသာ ပေါ်တတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ခြေမအဆစ်၊ ဒူးဆစ်နှင့် ခြေကျင်းဝတ်တို့တွင် အဖြစ်များဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ဂေါက်ရောဂါသည် သွေးထဲ၌ ယူရစ်အက်စစ် များ များသောကြောင့်ဖြစ်ရသည်။
သွေးထဲ၌ ယူရစ်အက်စစ် များလာပါက ထိုအက်စစ်များသည် မာခဲသည့်ပုံဆောင်ခဲများအဖြစ် အဆစ်များအတွင်း၌ ဖြစ်သွား၏။ Colchicine ၏ အာနိသင်မှာ အဆစ်နာမှုကိုဖြစ်စေသော ယူရစ်အက်စစ်ပုံဆောင်ခဲများ ဖြစ်တည်ခြင်းကို လျော့ကျစေပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ချပေးပါသည်။
Colchicine အား မျိုးရိုးလိုက်သည့်ရောဂါများဖြစ်သော (familial Mediterranean fever) လိုရောဂါများကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ဗိုက်နာခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း သို့ အဆစ်နာခြင်းတို့အား ကာကွယ်ရန်အတွက်ပါ သုံးနိုင်သည်။
ဤဆေးသည် ခန္ဓါကိုယ်၏ တစ်ချို့ပရိုတင်းထုတ်လုပ်မှု (အမိုင်းလွိုက် အေ)ကို လျော့နည်းစေပြီး ထိုပရိုတင်းများသည် familial Mediterranean fever ရှိသူများတွင် စုပုံလာတတ်၏။
Colchicine သည် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် တခြားအကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်သော နာကျင်မှုများတွင် မသုံးသင့်ပါ။
Colchicine အား နှလုံးအပြင်ဖက်ကိုကာထားသည့် အိတ်ရောင်ရမ်းခြင်း Pericarditis အား အရောင်ကျစေရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Colchicine စသောက်လျှင် သို့မဟုတ် ဆေးထပ်ဝယ်လျှင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှပေးသော ဆေးဝါးကုသမှုလမ်းညွှန်ကို သေချာဖတ်ပါ။ သိလိုသည့်အချက်များနှင့်ပါတ်သတ်၍ မေးခွန်းများရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကို မေးပါ။
Colchicine အား အစာနှင့်တွဲလျက်ဖြစ်စေ အစာမပါပဲဖြစ်စေ ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်း တိတိကျကျ သောက်ပါ။ ဆေးပမာဏညွှန်ကြားမှုသည် ကျယ်ပြန့်သလို အောက်ပါလမ်းညွှန်မှုနှင့်လဲ အတော်ပဲကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
ဆေးကို ညွှန်ကြားသည့်ပမာဏထက်ပိုသောက်လျှင်လဲ ဆေးအာနိသင်ပိုကောင်းမလာနိုင်ပါ။ ထို့အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အန္တရာယ်ကို ပိုမြင့်စေနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အတွက် ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါကျွမ်းကျင်အား မေးပါ။
ဂေါက်ရောဂါဖောက်သည့်အတွက် Colchicine အားသုံးမည်ဆိုပါက ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ဂရုတစိုက်လိုက်နာပါ။ Colchicine သည် ရောဂါစပေါ်ပေါ်ချင်းသုံးနိုင်ပါမှ အာနိသင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လမ်းညွှန်ထားသည့် ဆေးပမာဏသည် ၁.၂ မီလီဂရမ်အား လက္ခဏာစပေါ်ပေါ်ချင်းသောက်ပြီးနောက် တစ်နာရီကြာသည့်အခါ ဝ.၆ မီလီဂရမ် ထပ်သောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အများဆုံးညွှန်ထားသော ပမာဏသည် ၁.၈ မီလီဂရမ်အား တစ်နာရီအတွင်းသောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆေးအား နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ဖြစ်လျှင် အချိန်ဘယ်လောက်ခြားသောက်ရမလဲဆိုခြင်းကို ဆရာဝန်အား မေးပါ။
Colchicine အား ဂေါက်ရောဂါဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် နှလုံးအဖုံးအကာရောင်ခြင်းတို့အား ကာကွယ်ရန်သောက်မည်ဆိုပါက ဆေးပမာဏ သောက်ရမည့်အချိန်ဇယားတို့အား ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ဂရုတစိုက်လိုက်နာပါ။
familial Mediterranean fever ကြောင့်ဖြစ်သည့် နာကျင်မှုအား ကာကွယ်ရန်အတွက် Colchicine ကို သုံးမည်ဆိုပါက ၁.၂ မှ ၂.၄ မီလီဂရမ်ပမာသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ထိုဆေးပမာဏအား တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းပြီး နှစ်ကြိမ်သောက်နိုင်သည်။
သင့်လက္ခဏာများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ထိန်းနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်မှ ဆေးပမာဏကို ချိန်ညှိပေးပါလိမ့်မည်။
ဆေးပမာဏသည် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ တခြားဆေးများ အစာများနှင့် ကုသမှုအား တုန့်ပြန်မှုအပေါ်တို့တွင် မူတည်ပါသည်။ ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် ဆေးပမာဏတိုးခြင်း၊ အကြိမ်ရေပိုသောက်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားသည့်အချိန်ထက် ပိုစွဲသောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ပုံမှန်ညွှန်နေကျ ပမာဏမှာပင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
Colchicine အား မှန်မှန်သောက်ရန် ဆရာဝန်မှလမ်းညွှန်လျှင် ဆေးအာနိသင်ကောင်းကောင်းရရန် မှန်မှန်သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ဖို့မှတ်မိစေရန် နေ့စဉ် တစ်ချိန်တည်းတွင်သာသောက်ပါ။
ဂရိတ်ဖုသီးနှင့်ဖျော်ရည်တို့ကို ဒီဆေးသောက်နိုင်နေစဉ် ဆရာဝန်မှမပြောမချင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဂရိတ်ဖုသည် သွေးထဲတွင် ဆေးပမာဏကို များလာစေနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အတွက် သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Familial Mediterranean Fever ကြောင့်ဖြစ်သော လက္ခဏာများအား ကုသရန်အတွက် သုံးမည်ဆိုပါက အခြေအနေမတိုးတက်လာလျှင် သို့ ပိုဆိုးလာလျှငဆရာဝန်အားပြောပါ။
Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Colchicine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။
ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Colchicine ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Colchicine ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။)
Colchicine အား အိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချတာမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာ အရေးကြီး၏။
ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Colchicine အားရေခဲသေတ္တာထဲ၌ သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်သောကြောင့် အေးခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးဝါးတစ်ခုကိုသုံးရန်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဆေးသောက်လျှင်ဖြစ်မည့် ဆိုးကျိုးနှင့် ကေင်းကျိုးကို ချိန်ရပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အား သင်ရော ဆရာဝန်ပါ နှစ်ဦးပူးပေါင်းပြီး ချရပါမည်။ ဒီဆေးအတွက် အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်၏။
ဤဆေး သို့မဟုတ် တခြားဆေးများနှင့် ပုံမမှန်သောအရာများ သို့မဟုတ် ဓါတ်မတည့်မှုများ ရှိလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
သင့်၌ တခြားဓါတ်မတည့်မှုများ ဥပမာ အစာ၊ ဆိုးဆေး၊ ကြာရှည်ခံဆေး သို့ သတ္တဝါများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင် ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပါ။ မညွှန်ပဲသောက်နိုင်သည့်ဆေးများတွင်တော့ ဗူးတွင်ပါသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သေချာဖတ်ကြည့်ပါ။
ဂေါက်ရောဂါရှိသည့်ကလေးများတွင် Colchicine ၏ အသက်အရွယ်နှင့်အာနိသင် ဆက်စပ်မှုမျိုးအား သင့်တော်စွာလေ့လာထားသည်မျိုး မရှိပါ။ စိတ်ချရမှုနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းလဲ မထုတ်ပြန်ထားပါ။
FMF ရှိသော ကလေးများအား Colchicine သုံးရန် မသင့်တော်သည့် ကလေးများတွင်ဖြစ်တတ်သည့်ပြဿနာများကိုလဲ သင့်တော်စွာလေ့လာမှုများဖြင့် သက်သေမပြရသေးပါ။
အသက်လေးနှစ်အောက် FMF ရှိသောကလေးများတွင် စိတ်ချရမှုနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုအား မထုတ်ပြန်ထားပါ။
FMF ရှိသော အိုမင်းသူများအား Colchicine သုံးရန် မသင့်တော်သည့် အိုမင်းသူများတွင်ဖြစ်တတ်သည့်ပြဿနာများကိုလဲ သင့်တော်စွာလေ့လာမှုများဖြင့် သက်သေမပြရသေးပါ။ သို့သော် အိုမင်းသူများသည် အသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သည့် ကျောက်ကပ်ပြဿနာ အသည်းပြဿနာများ ရှိနိုင်သောကြောင့် သတိနှင့်သုံးရန်လိုအပ်သလို ဆေးပမာဏညှိခြင်းပါ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာလျှင် ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
ကြွက်သာနာခြင်း သို့ အားနည်းခြင်း
လက်ချောင်း ခြေချောင်းများတွင် ထုံခြင်း ကျင်ခြင်း
နှုတ်ခမ်း၊ လျှင် သို့မဟုတ် လက်ဖဝါးများ ဖြူဖျော့လျှင် သို့ မီးခိုးရောင်သန်းလျှင်
ပြင်းထန်စွာ အန်ခြင်း သို့ ဝမ်းလျှောခြင်း
သွေးခြေဥလွယ်ခြင်း သွေးထွက်လွယ်ခြင်း၊ အားနည်းသလို မောပန်းသိလို ခံစားရခြင်း
ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ တုပ်ကွေးကဲ့သို့လက္ခဏာများပေါ်ခြင်း
ပုံမှန်ထက် ဆီးသွားနည်းခြင်း သို့ ဆီးလုံးဝမသွားခြင်း
မပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ –
မပြင်းထန်သည့် ပျို့ခြင်း သို့ အန်ခြင်း ဗိုက်နာခြင်း သို့ မပြင်းထန်သော ဝမ်းလျှောခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Colchicine သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံး၏စာရင်းကိုပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။)
ဤဆေးအား အောက်ပါဆေးများနှင့် တွဲမသုံးရပါ။ သင်၏ဆရာဝန်မှ အောက်ပါဆေးများနှင့်တွဲမကုရန် သို့မဟုတ် သင်သောက်နေသည့်ဆေးများကို ပြောင်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Colchicine က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Colchicine သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအား ပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီး၏။ အထူးသဖြင့်
အစာအိမ်အနာ သို့ တခြားသော အစာအိမ်ပြဿနာများ – အစာအိမ်နာခြင်း ပိုဆိုးနိုင်သည်။ ထို့အတူ Colchicine သည် တစ်ချို့သော အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ပြဿနာများကို ပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါသည်။
သွေးပြဿနာများ (ဥပမာ – Aplastic သွေးအားနည်းခြင်း၊ Granulocytopenia, Leukopemia, Pancytopenia, thrombocytopenia)
ကြွက်သား သို့ အာရုံကြောပြဿနာများ – သတိနှင့်သုံးပါ။ အခြေအနေပိုဆိုးသွားနိုင်ပါသည်။
အသည်းရောဂါများ – ထိုလူနာများတွင် မသုံးသင့်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ရုတ်တရတ်ပြင်းထန်သောဂေါက်ရောဂါအတွက် လူကြီးသောက်ရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ကနဦးပမာဏ – ဂေါက်ဖောက်ခြင်း – 1.2 mg ရောဂါဖောက်ဖောက်ခြင်းသောက်ရန်၊ တစ်နာရီကြာပြီးနောက် 0.6 mg သောက်ရန်
အများဆုံးပမာဏ – တစ်နာရီအတွင်း 1.8 mg သောက်ရန်
strong CYP450 3A4 inhibitors များနှင့် တွဲပြီး လမ်းညွှန်လျှင်
0.6 mg သောက်ပြီး တစ်နာရီကြာလျှင် 0.3 mg သောက်ရန်။ ၃ ရက်ထက်ပိုနောက်မကျပဲ ဆေးကို တစ်ခါထပ်သောက်ရမည်။
moderate CYP450 3A4 inhibitors များနှင့် တွဲပြီး လမ်းညွှန်လျှင်
1.2 mg အား တစ်ကြိမ်တည်းသောက်ရန်။ ၃ ရက်ထက်ပိုနောက်မကျပဲ ဆေးကို တစ်ခါထပ်သောက်ရမည်။
P-glycoprotein inhibitors များနှင့် တွဲပြီး လမ်းညွှန်လျှင်
0.6 mg အား တစ်ကြိမ်းတည်းသောက်ရန်။ ၃ ရက်ထက်ပိုနောက်မကျပဲ ဆေးကို တစ်ခါထပ်သောက်ရမည်။
Familial Mediterranean Fever လူကြီးသောက်ရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
1.2 – 2.4 mg အား တစ်ကြိမ် သို့ နှစ်ကြိမ်ခွဲပြီး နေ့စဉ်သောက်ရန်။
ရောဂါအားထိန်းချုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သလို ဆေးပမာဏာအား ထပ်တိုးသင့်သည်။ နေ့စဉ်ပမာဏအား 0.3 mg/day နှုန်းဖြင့် အများဆုံးပမာဏအထိသုံးနိုင်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆေးပမာဏအား 0.3mg/day နှုန်းလျော့ချနိုင်သည်။
strong CYP450 3A4 inhibitors များနှင့် တွဲပြီး လမ်းညွှန်လျှင် – 0.6 mg နေ့စဉ်သောက်ပါ။ 0.3 mg စီခွဲပြီး နှစ်ကြိမ်သောက်ရမည်။
moderate CYP450 3A4 inhibitors များနှင့် တွဲပြီး လမ်းညွှန်လျှင် – 1.2 mg နေ့စဉ်သောက်ပါ။ 0.6 mg စီခွဲပြီး နှစ်ကြိမ်သောက်ရမည်။
P-glycoprotein inhibitors များနှင့် တွဲပြီး လမ်းညွှန်လျှင် – 0.6 mg နေ့စဉ်သောက်ပါ။ 0.3 mg စီခွဲပြီး နှစ်ကြိမ်သောက်ရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
4 to6နှစ်: 0.3 to 1.8 mg နေ့စဉ်သောက်ရန်, တစ်ကြိမ် သို့ နှစ်ကြိမ်ခွဲသောက်ရန်
6 to 12 နှစ်: 0.9 to 1.8 mg နေ့စဉ်သောက်ရန်, တစ်ကြိမ် သို့ နှစ်ကြိမ်ခွဲသောက်ရန်
12 နှစ်အထက်: 1.2 to 2.4 mg နေ့စဉ်သောက်ရန်, တစ်ကြိမ် သို့ နှစ်ကြိမ်ခွဲသောက်ရန်
Colchicine (ကိုလ်ချီစင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Colchicine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆေးပြား – 0,25 mg; 0,5 mg; 0,6 mg; 1 mg
ဆေးလွန်သော လက္ခဏာများမှာ –
ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ သွေးခြေဥခြင်း သို့ သွေးယိုခြင်း
လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ တခြားသော ကူးစက်ရောဂါပုံစံလက္ခဏာများ
နှုတ်ခမ်း လျှာ လက်ဖဝါးများတွင် ဖြူဖျော့ခြင်း သို့ မီးခိုရောင်သန်းခြင်း
Colchicine ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင် သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။